Ny fizahan-tany Trinidad dia mikendry mpitsidika iraisam-pirenena 380,000 ho an'ny 2020
Home » Travel Associations News » Ny fizahan-tany Trinidad dia mikendry mpitsidika iraisam-pirenena 380,000 ho an'ny 2020
Ho an'ny taom-piasana vaovao 2019/2020, Fizahan-tany Trinidad LimitedTanjona lehibe (TTL) ny fampitomboana ny fahatongavan'ireo mpitsidika 7% ka hatramin'ny 380,000, hahatratra ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny 64% ary hampitombo ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika. Izany dia miorina amin'ny fampisehoana fizahan-tany amin'ny taona lasa Andriamanitra telo izay iray dia efa nahatratra 276,269 2 ny mpitsidika iraisam-pirenena (fiakarana 2018% noho ny XNUMX) nandritra ny volana Janoary ka hatramin'ny Septambra.
Andriamatoa Howard Chin Lee, filohan'ny fizahan-tany Trinidad dia nilaza fa “Ity dia fandaharam-potoana feno fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany any Trinidad. Ny fifantohanay dia ny famolavolana marika 'Trinidad' azo fantarina mazava tsara hampahafantatra ny toerana itodiana manerana an'izao tontolo izao, hanomezana traikefa mpitsidika miavaka ary hametraka an'i Trinidad ho toerana iray safidin'ny safidy. Ho fanatanterahana izany, namolavola tondrozotra feno izahay momba ny fomba ahafahantsika miara-miasa amin'ny governemanta sy ny mpandray anjara mba hitondra any amin'ny sehatra vaovao ny sehatry ny fizahan-tany. "
Ny fizahan-tany Trinidad koa dia mamolavola drafitra hanampiana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana hanorina amin'ny sorona fizahan-tany mba hisarihana mpitsidika bebe kokoa amin'ity toerana ity, hamorona asa bebe kokoa ary hanamafy ny fandraisany anjara lehibe amin'ny toekarem-pirenena. Amin'io lafiny io, drafitra tetikady stratejika iray taona novolavola ary mpiasa vaovao sivy ambin'ny folo (19) no nidina an-tsambo ho an'ny orinasa, mba hanampy amin'ny fitantanana ny fandaharam-potoana stratejikan'ny fikambanana.
Nekena lehibe telo (3) novolavolaina hampitombo ny fizahantany:
 Fihaonambe (orinasa)
Tsy ho ela ny orinasa dia handefa ny maha-izy azy sy ny tranokalan'ny Destination Trinidad miaraka amin'ny fampielezana dokambarotra mivarotra amin'ny tsena iraisam-pirenena lehibe manerantany. Ireo fanentanana ireo, ao anatin'izany ny fampielezan-kevitra Diaspora, dia mikendry ny hampiroborobo ny fahatongavan'ireo volana ho avy, ary mialoha ny Karnaval 2020, ary hisarihana ireo mpitsidika isan-taona mankany amin'ny toerana haleha.
Ny 2020 dia manolotra ny orinasa fotoana sasantsasany indray mandeha hanehoana an'i Trinidad manerantany. Amin'ny volana aprily 2020 dia i Trinidad no hanana toeram-pandraisana hasher an'arivony an'arivony (mpihazakazaka lalana) avy amin'ny firenena 75 mahery. Ny hetsika fampiroboroboana dia novolavolaina mba hamporisihana ireo izay manatrika ny hetsika hamandrika ny fialan-tsasatr'izy ireo ary hampiseho an'i Trinidad ho toerana mety ho an'ny hetsika manerantany ary, ankoatr'izay, fanatanjahan-tena sy toerana itodihana.
Ny fizahan-tany Trinidad dia miara-miasa amin'ny SportTT, Ministeran'ny Fampandrosoana ny Vondrom-piarahamonina, Kolontsaina ary ny Zavakanto ary ireo mpiara-miombon'antoka hafa mba hanararaotra amin'ny fomba feno ny fotoana rehetra hampiantranoana hetsika ara-panatanjahantena, kolontsaina ary hafa.
Ny orinasa dia hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka lehibe, ao anatin'izany ny mpitatitra fiaramanidina sy ny varotra iraisam-pirenena, mba hampitana fifandraisana tsara sy maharitra, hampiditra zotra sy zotram-piaramanidina vaovao mankany amin'ny toerana itodiana; manamora ny fitomboan'ny fahatongavan'ireo mpitsidika.
Mandeha ny drafitra hamerenana indray ireo sehatra nomerika an'ny orinasa hahafahana mikendry ireo mpitsidika mety ho tonga miaraka amina hafatra sy tolotra manokana; natao hanintonana ny tombontsoany manokana izy rehetra. Tanjona ny hisarihana mpitsidika tsy manam-paharoa 2,500 isam-bolana ao amin'ilay tranonkala ary hahatratra 30 tapitrisa ny fahitana amin'ny alàlan'ny fitaomana mahery vaika manerantany.
Ny fizahan-tany Trinidad dia mikasa ihany koa ny hampiakatra ny fandaharam-pampianarany fizahantany, hampitombo ny fahafantarana ny sanda sy ny tombotsoan'ny fizahantany amin'ny sehatra nasionaly, ary hampiorina ny saina fizahan-tany tsara hita ao amin'ny Trinite rehetra.
Ny sehatry ny fizahan-tany eo an-toerana dia mazava ho azy fa hanana andraikitra lehibe indrindra amin'ny ho avy amin'ny toerana haleha ary ny fotoana atolotry ity indostria ity ho an'ny toekarena, ny asa ary ny fampandrosoana ara-tsosialy dia goavana. Vonona ny hitondra fizarana ny indostria ny fizahantany Trinidad ary manolo-tena hiantoka ny fahatanterahan'ny tontolon'ny fizahan-tany tanteraka.
Seranam-piaramanidina Frankfurt: Ny fandaharam-potoanan'ny ririnina vaovao dia misy toerana 259 manerantany
Ny United Airlines sy ny Air New Zealand dia mandefa sidina Newark-Auckland tsy miato